Ambongadiny momba anay - mpamatsy Hangzhou HEO mpamatsy
Hangzhou HEO Technology Co., LTD dia mpanamboatra efa za-draharaha izay nanolo-tena tamin'ny fikarohana, famolavolana ary famokarana kasety test-in-Vitro (IVD) rapide test (Kit) sy fitaovana fitsaboana hafa tato anatin'ny 10 taona. Nahomby izahay nanorina fifandraisana ara-barotra tena tsara tamin'ny firenena 60 hafa eran'izao tontolo izao, toa ny firenena eropeana, UK, Amerika avaratra, Azia atsimo atsinanana, amerikanina latina, amerika atsimo, firenena afrikanina sns. Sina, izay malaza amin'ny Farihy Andrefana.
HEO TECHNOLOGY dia mandrakotra faritra misy atrikasa mihoatra ny 5000 metatra toradroa. Manana zavamaniry fanandramana voamarina avy amin'ny CHINA National Food and Drugs Administration sy atrikasa fanadiovana C-grade 1100 metatra toradroa. Manana ekipa R&D laboratoara matihanina izahay miaraka amin'ny mpikaroka sy mpamorona vokatra 10 vaovao.
Hatramin'ny niorenany tamin'ny 2011 dia nanomboka nifantoka tamin'ny fiarovana ara-tsakafo sy ny fikarohana, fampandrosoana an'i In-Vitro Diagnostic Reagents izahay, ary manaraka akaiky an'i ISO13485 sy ISO9001 amin'ny rafitra fitantanana kalitao sy ny fomba famokarana rehetra izahay.
Ny tsipika vokatra lehibe
Diagnose Immune (immunoassay volamena koloidaly)
Kasety fitsapana haingana COVID-19 Antigen Rapid Gold Colloidal Gold）
Haingam-pandeha, 15 minitra fotsiny hahalalana ny valiny
Marina, mahomby, ampiasaina matetika
Famantarana haingana ny virus gripa
COVID-19 / Influenza A + B Antigen Combo Rapide Test Cassette
Famaritana haingana ny viriosy corona vaovao sy gripa
Zava-mahadomelina fanararaotana / fanapoizinana
Izahay dia mpanamboatra lehibe indrindra amin'ny teknolojia sy ny vokatra diagnostika in vitro, manana laza matanjaka sy serivisy miovaova samy hafa manana fahalalahana ambonimbony kokoa amin'ireo mpaninjara matihanina sy ireo mpiara-miasa miasa eo amin'ny tsena manerantany.
Miaraka amin'ny teny filamatra ”Ny kalitao sy ny serivisy matihanina no manjaka amin'ny ho avy! ”， HEO mikatsaka hatrany ny fitoniana kalitao tsara indrindra sy ny serivisy fandraharahana manerantany. Azo antoka fa mifantoka amin'ny fifehezana ny kalitaon'ny fomba fiasa amin'ny antsipiriany izahay.
Miarahaba antsika sakaiza eran'izao tontolo izao izahay tonga hitsidika ny orinasanay izay misy ny Farihy tsara tarehy any Hangzhou.